‘मेरो देश हाकिमको या कानुनको ?’
देश बनाउछौँ भनेर जोशिएर होमिएका हामीले अहिलेका युवा पुस्ताले हाकिमतन्त्र विरुद्ध लडेर पुस्ता खर्चिनु पर्ने ?
१८ मङ्सिर, २०७५ || प्रकाशित ११:५४:००
यो मेरो आवाज भन्दा नि सायद समग्र युवावर्गको निराशयता प्रतिनिधित्व गर्ने साझा आवाज भन्दा ठिक होला । साचै आज मलाई रुन मन लागेको छ, कराउन मन लागेको छ । कारण सोध्नुहोला, एक शब्द काफी छ । हाकिमतन्त्र । मलाई प्रश्न गर्न मन लाग्छ कि यो मेरो देश कानुनको हो या हाकिमको ? आज यहि प्रश्नले विरक्तिएको छु ।
म भित्र मात्र जोश भरिएको छ, म मात्र विकास चाहन्छु, म मात्र केही गर्न चाहन्छु, म मात्र मेरो ठाउँ परिवर्तन गर्न चाहन्छु, म मात्र मेरो देश बनाउन चाहन्छु किमार्थ होइन । सायद यो जोश, यो भाव केही अपवाद बाहेक हरेक युवामा हुन्छ नै । अब प्रश्न आउँछ, युवाले परिवर्तन गर्न चाहन्छ नै भने आखिर परिवर्तन हुँदैन किन ? यो प्रश्नको पदावली साधारण भएतापनि यो प्रश्न आफैमा एक मौलिक प्रश्न हो । मौलिक कुन हिसाबमा भन्दा खेरी यो प्रश्न नेपालभित्र मात्र मान्य छ । अर्थात् This question has validity only in Nepal.
यदि विश्वाश लाग्दैन भने इतिहासलाई साक्षी राख्न सक्नु हुन्छ । जुन–जुन देशमा यो प्रश्न ष्लखबष्मि भयो, त्यो देश कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो । जहाँ यो प्रश्न ख्बष्मि छ, त्यहाँ त तपाई हामी स्वयँ छदैछौँ । वर्णन गरिरहन आवश्यक देख्दिन । दुःख वा दुर्भाग्यको कुरा के छ भने यो प्रश्नले अझ नेपालमा कयौं पुस्तासम्म खबष्मिष्तथ पाउने निश्चित देखिदैँछ ।
युवामा परिवर्तनको ज्वारभाटा हुन्छ भन्ने यथार्थ पुष्ट्याउँदै हामी युवा साथीहरु मिलेर सिरहाको गोलबजारमा बिगत केही महिना देखि आरम्भ साईन्स एण्ड कल्चर क्लब सञ्चालन गर्दै आएका छौँ । हामीले धेरै कार्यक्रमहरु पनि गरिसक्यौँ । थप कार्यक्रमहरु गर्न क्लब दर्ता नहुँदा अप्ठ्यारो आउँन थाल्यो । एकजना कानुनविद्सँग सल्लाह गरि सम्पूर्ण कागजात सहित जिल्ला पुग्यौँ । जिल्लामा संस्था दर्ता सम्बन्धि छुट्टै कोठा रहेछ । कोठा नम्बर १६ हामी दशैँ विदा पछि पुगेका थियौँ । कोठा नम्बर १६ को हाकिम विरामी छ भन्ने खबर आयो । छठपछि आउनुहोला भनियो । छठपछि जाँदा कोठा नम्बर १६ को हाकिम आउनुभएको रहेछ । हाकिम साहबलाई देख्दा खुशी भयौँ । डकुमेन्ट्स सहितको फाईल पेश गर्यौँ । सरर..... हेर्नूभयो । निवेदनको ढाँचा मिलेन भनेर फाईल दर्ताको तोक लगाउनु भएन ।
अनि हामि उहाँलाई भन्यौँ, ‘सर हुन्छ, हामी भोलि निवेदनको ढाँचा मिलाएर आउँछौ, अरु के के मिलाउनु पर्ने हो सर ?’ उहाँको जवाफ रह्यो ‘भोलि निवेदन मिलाएर आउन पहिला ।’ थप प्रश्न गर्न खोज्दा झपार खाइयो । मेरो मनमा प्रश्न उब्जियो । ‘के सम्पूर्ण अपुग वा मिलाउनु पर्ने कुरा एकसाथ भन्न हुन्न र ?’ प्रश्न मनमै रह्यो । हामी फिर्ता भयौँ । भोलि फेरि गयौँ । अर्को समस्या देखाउनु भयो । विधानको चार सेट मध्ये पहिलो सेटमा तदर्थ समितिको सक्कली फोटो भएको कागज पेश गरिएको थियो भने बाँकी तीन सेटमा सोही कागजको फोटोकपी पेश गरिएको थियो । बाँकी तीन सेटमा फोटोकपी पेश गर्दा हुन्छ भनेर काठमाडौंमा संस्था दर्ता गराई सक्नुभएको एक साथीले जानकारी दिनुभएको थियो । हाकिम सहाबले फोटोकपी राख्न नमिल्ने भन्दै फायल फिर्ता गर्नुभयो । प्रतिवाद गर्दै मैले भने, ‘सर, काठमाडांै तिरको साथीले हुन्छ भन्नू भएको थियो त ?’ उहाँको जवाफ थियो, ‘काठमाडौंमा हुन्छ यहाँ हुदैन ।’ मैले भने, ‘काठमाडौं र सिरहाको कानुन एउटै होइन र ?’ धेरै प्यारप्यार नकराउ भन्दै फेरि झपार खाइयो । अर्को दिन फेरि चारवटै विधानमा सक्कली फोटो टाँसेर फाईल बुझायौँ । म विरामी छु भन्दै फाईल हेर्नू भएन । विधान अध्यन गर्नुपर्छ, म अहिले विरामी छु, सक्दिन भन्नूभयो । दर्ताको तोक त लगाइदिनुस् भन्दा दर्ता भएपछि यो फाईल म कहाँ छोड्नपर्छ, हराउला भन्नू भो । केही सीप लागेन । चार दिनपछि जादा फाईल दर्ता भयो । विधान अध्यनको समय माग गर्दै एक हप्ता पछि आउ भन्नुभयो । सनाखतको लागि । विचैमा पोलिस ईन्क्वायरीको रिपोर्ट पनि बुझायौँ । क्लबका केहि प्रतिनिधिहरु अध्यनको शिलशिलामा काठमाडौं आउन पर्ने हुदाँ सनाखतको लागि हामी सबै प्रतिनिधि उपस्थित हुन नसक्ने हुदाँ कानुनविद्सँग सल्लाह गरि एक प्रतिनिधिको नाममा अख्तियारी तयार पारियो । क्लब दर्ताको जिम्मा फलानोलाई दिइएको भनेर सबै प्रतिनिधिको सहिछाप लगाएर अख्तियारि तयार पारिएको थियो । अख्तियारी भएपछि एक व्यक्तिले पनि सनाखत गरि संस्था दर्ता हुने प्रावधान कानुनमा रहेको कानुनविद्को तर्क थियो । आफूले यस प्रावधानको अभ्यास पनि गरेको समेत बताउनुभयो । तर, अख्तियारी बुझाउदा समेत सनाखतको लागि सबै जनालाई बोलाइयो । काठमाडौंबाट कलेज छुटाउँदै फेरी सिरहा आयौँ । बडो दिक्दार महसुस भयो ।
सनाखत भयो । टिप्पणी आदेश भयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडियो) साहबकहाँ फाईल पुग्यो । उहाँको प्रश्न आयो, ‘विधान कसले अध्यन गर्यो ?’ हामीले जवाफमा हाकिमको नाम र कोठा नम्बर फर्कायौँ । साहबको प्रतिक्रिया थियो, ‘ए त्यसले अध्यन गरेको त मलाई थाहा छ’ अर्थात सो हाकिमले विधान अध्यन गर्दा लापरवाही गर्छ भन्ने भाव साहवको प्रतिक्रियाबाट सजिलै बुझ्न सकिन्थ्यो । लापरबाही गर्ने हाकिमलाई किन कारबाही नगर्नु भएको भनेर प्रतिवाद गर्न मन लाग्यो । तर, सकिन । सिडियो साहबसँग प्रतिवाद गर्दा आफ्नै गाउँको काका पर्नेलाई ‘थुन दे सालेलाई’ भन्दै थुनुवामा राखेको याद आएर डराएछु । साहबले आफूले पनि विधान अध्यन गर्नुपर्ने भन्दै ५ दिन पछि बोलाउनु भयो । सामबारको दिन परेको रहेछ । साहबको कोठा छिरियो । विधान गलत रहेको भनियो । कोठा नम्बर १६ जान आदेश भयो । आफू ट्वा परे । जसले अध्यन गरेको विधान गलत छ त्यही किन जाने ? अचम्म लाग्यो । कोठा नम्बर १६ को हाकिमले विधान गलत छ भन्नू भो । अनि मैले भने, ‘अस्ति नै राम्रोसँग अध्यन गर्न पथ्र्यो नि सर ।’ जवाफ आयो, ‘मैले जाने बुझे अनुसार गरेको, गल्ती भएपछि म के गरुँ ?’ अनि गल्ती के छ भनेर सोध्दा एक हप्तापछि आउ भन्नू भयो । जिल्लाको संस्था दर्ताको फाँटको प्रमुख हाकिमको यस्तो गैरजिम्मेवारी जवाफ सुन्दा विरक्तिए ।
यतिसम्मको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति आयो होला भनेर पत्याउन गार्हो भयो होला । तर, यथार्थ यस्तै छ । अब आफै भन्नुस्, यो देश हाकिमको रहेछ या कानुनको ?
अब भन्नुहोस्, एक सर्वसाधारणले कानुन बुझ्न कुनकुन हाकिमको टेबल धाउने ? सिरहाको धाउने कि काठमाडौंको ? एक सर्वसाधारणलाई कानुन–कानुन भनेर कति दिन तर्साउने ? के हाम्रो कानुन साँच्चै यतिको जटिल र अस्पष्ट छ र ? कि साँच्चै काठमाडौं र सिरहाको कानुन फरक छ ? हाकिमको मुख नै कहिलेसम्म कानुन रहने ? एक व्यक्तिको शालीनताको अगाडि ठिङ्ङ उभिने कानुन नातावाद र चाकरीबाजको अगाडि कहिलेबाट लम्पसार नपर्ने ? पैसाको बिट्टो र टाईसुटको रवाफले कहिलेबाट कानुन नलचकिने ? साँचो कानुन एक सर्वसाधारणले कहिले अनुभुत गर्ने ?
कठै ! मेरो देश, पुस्तौ विताएर राणातन्त्र फाल्यौँ, राजतन्त्र फालियो, पुस्तौ खर्चेर गणतन्त्र आयो, अब हाकिमतन्त्र फाल्न कति पुस्ता खर्चिनु पर्ला ? देश बनाउछौँ भनेर जोशिएर होमिएका हामीले अहिलेका युवा पुस्ताले हाकिमतन्त्र विरुद्ध लडेर पुस्ता खर्चिनु पर्ने ? कठै बरि !
लेखः रामकुमार यादव, सिरहा
#प्रेशरकुकर बम #विप्लव #कुकर बम #जनकपुर एयरपोर्ट